"(Hoy ny Tompo Jesosy efa nitsangana tamin’ny maty:) Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao." Matio 28:20
"Tsy hatahotra ny loza aho; fa Ianao no amiko." Salamo 23:4
- Vehivavy iray efa zokiolona, mananotena, no indro manamboatra akanjobà eo akaikin’ny varavarankelin’ny lakoziany. Ilay famantaranandro tranainy an’ny fianakaviana hatrizay no hany re manapaka ny fanginana. Indraindray ny masony no mitopy eny amin’ilay sezan’ny vadiny, izay efa tsy misy mpipetraka intsony ankehitriny.
- Irery ao amin’ny biraony, mitehin-takolaka, ity mpanao asa tanana efa ho bankirompitra, mijery tsirairay ireo faktiora tsy voaloa ary mamerina ny kaontiny.
- Irery ao an’efitranony ity mpianatra, mamerin-desona faramparany, ny andro mialoha fanadinana lehibe. Feno tebiteby izy, tonga saina fa rahampitso dia ho irery manoloana taratasim-panadinana foana. Manirery, fitsapana, fahoriana, tebiteby, tsy fahombiazana, ireo dia teny fantatry ny tsirairay amintsika. Tsy nampanantena ny olony mihitsy ny Tompo hoe tsy hisy zava-manahirana na ranomaso ny fiainany. Nefa kosa nampanantena Izy fa hiara-hamakivaky izany amin’izy ireo.
Tamin’ny voalohandohan’ny naha kristiana ny apostoly Paoly, dia nahare ny Tompo izy niteny taminy hoe: “Aza matahotra, fa mitenena ihany, ka aza mangina; fa Izaho momba anao” (Asan’ny Apostoly 18:9-10). Ary tamin’ny faramparan’ny fiainany izy, tao amin’ny epistily faharoa ho an’i Timoty, izay karazana fara hafatra ara-panahy, dia nijoro ho vavolombelona fa voahazona io fampanantenana io: “Ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy” (2 Timoty 4:17).
Na dia mikapoka anao aza ny fiainana, aza hadino mihitsy fa tia anao Jesosy. Fantany fa tena mila ny fanatrehany ianao, ary tsy hamela anao ho irery Izy, na oviana na oviana.